लगातारको अबिरल बर्षाका कारण हाल बेहाल ! (हेर्नुस फोटो फिचर) « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
लगातारको अबिरल बर्षाका कारण हाल बेहाल ! (हेर्नुस फोटो फिचर)
उदयपुर । लगातारको अबिरल बर्षाका कारण उदयपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । अबिरल बर्षा संगै उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट लगायत आसपासका विभिन्न गाउँहरु डुवान भएका छन् । साता दिन देखि उदयपुर लगायत आसपासका क्षेत्रमा लगातार बर्षा हुदा डुवान सुरु भएको हो ।
बर्षाका कारण नदि तथा खोला खहरेहरुमा पानिको बहाब बढ्न थालेपछि यातायातका साधनहरु ठप्प जस्तै भएका छन् । यातायातका साधनहरु संचालनमा आउन नसक्दा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधनहरु संचालनमा आउन सकेका छैनन् । सवारी साधनहरु संचालनमा आउन नसक्दा गनतव्यमा निस्केका यात्रुहरु अलपत्र जस्तै बनेका छन् ।
बर्षाका कारण सडक नालीमा पानि ओभर फ्लो हुदा सडकहरु पूर्णरुपमा जलमग्न भएका थिए । सडक जलमग्न हुदा सडक यात्रु तथा सवारी आवगनमा समस्या परेको थियो । साता दिन यताको बर्षाका कारण उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट मात्रै नभएर विभिन्न गाउँहरु डुवानमा परेको थियो । कतिपय स्थानमा भने नदि तथा खोलाले जग्गा कटान गर्न सुरु गरेको छ । पत्रकार विश्वराज तामाङको सहयोगमा